Iindaba-Ukunyanzelwa kweemveliso ze-IVEN-Ityhubhu yokuQokelelwa kwegazi
Ampoule Ukuzalisa Imveliso Line
Ibhotile yokugcwalisa ulwelo yokuhambisa amanzi
Umatshini weSirinji ozalisiweyo
Virus Sampling Tube Ukuhlangana Line
OEB5 Incology Incology iglasi yokujika isityalo
Umshini wokuqokelela ityhubhu yokutsala igazi
Inkqubo yoNyango lwaManzi ye-RO yamayeza
Ukufakwa kweemveliso ze-IVEN-Ityhubhu yokuQokelelwa kweGazi
I-Ampoule-Ukusuka kumgangatho ofanayo ukuya kuKhetho loMgangatho oluCwangcisiweyo
Ityhubhu yokuqokelela igazi ityhubhu luhlobo olulahlayo lweglasi yokuthambisa ityhubhu engakwaziyo ukuqokelela ubungakanani begazi kwaye kufuneka isetyenziswe ngokudibeneyo nenaliti yokuqokelela igazi. Zili-9 iindidi zeetyhubhu zokuqokelela igazi, ezibalwe ngombala wekepusi. Umatshini wokufaka iityhubhu ze-vacuum yegazi siseti yezixhobo ezisetyenziselwa iwindow yokuqokelela igazi esibhedlele ngokukhetha ngokuzenzekelayo iityhubhu zokuqokelela igazi, ukuprinta ngokuzenzekelayo kunye nokuncamathisela iileyibhile zebhakhowudi ezinolwazi lwesigulana.
Kule mihla, imeko yokuqokelelwa kwegazi kwiiklinikhi zezigulana ezingalaliswayo inzima. Izigulana ziqokelela igazi ngendlela egxileyo, kwaye ixesha lolayini lide kakhulu, nelithambekele ekubangeleni iimpikiswano ezingeyomfuneko. Akunakuphepheka ukuba abongikazi banokwenza iimpazamo ekukhetheni iityhubhu zokuqokelela igazi kunye nokuncamathelisa iibhakhowudi azimiselweyo. Inkqubo sisixhobo esikrelekrele, esinolwazi kunye nesimiselweyo esidibeneyo.
KwiShanghai IVEN Pharmatech Engineering Co, Ltd, siqhubeka sisenza uphando olunzulu. Inkqubo iyenza lula inkqubo yomsebenzi, icutha ixesha lokuqokelelwa kwegazi kwizigulana, inyusa inani lezigulana zokuqokelela igazi kwiyunithi yexesha, ukuphucula ukulinda okuxineneyo kunye nemigca emininzi yezigulana eziqokelela igazi. Ngapha koko, iphucula ukwaneliseka kwesigulana kwaye ifezekise ulwazi olusekwe kulwazi olusekwe kulwazi lwedijithali olusekwe kulwazi. Ngokwezinto zokuqokelela igazi, ukukhetha iityhubhu ezikrelekrele, ukuprinta ngokuzenzekelayo kunye nokuncamathisela iilebheli phantsi kwesiseko sokuba iilebheli zoqobo ziyaqatshelwa ngokuzenzekelayo. Kwaye isixhobo sokuhlola ngokuzenzekelayo siyala ityhubhu ebhalwe ukuba akukho ilebhile. Iyakuthintela ukusebenza ngesandla kweelebheli ezigubungela isampulu yefestile, ukhetho olungalunganga, ukhetho olulahlekileyo lweetyhubhu zokuqokelela igazi kunye neelebheli ezingalunganga. Inokuphucula ngokufanelekileyo ukusebenza kokuqokelelwa kwegazi, ukuphucula ukoneliseka kwesigulana, ukunciphisa ukubakho kweengxabano zoogqirha nezigulana, kunye nokukhuthaza ukusebenza okunempilo ngexesha lenkqubo yovavanyo kunye nonyango.